SHOP: Burton 2015-2016 Haweenka Dumarka
SHOP: Our 5 Jecwoolka jecel ka Burton 2015-2016 Uruurinta Haweenka
Ma aha Burton? Ka feker calaamadeyntu waxay ku habboon tahay wiilasha da'da yar ee park park, ama baraf barafka qaada? Mar kale u fiirso, maxaa yeelay jeegaga cusubi waxa laga yaabaa in aad maskaxdaada u rogto. Inkasta oo Burton ay muddo dheer ka soo wareegtay boodhka, muuqaalka barafka, oo sanadkaan ah waxay bixiyaan kala duwanaansho kala duwan doorashadooda intii hore.
Inkasta oo dharka jilicsani uu ku soo bandhigo Burton dabiiciga ah ee dabacsan, kuwa kale waxay u egyihiin waxyaabo aad ka arki kartid dukaanka qadiimiga ah ee Aspen, laakiin dhammaantood waa la jaraa khad nadiif ah oo loogu talagalay in laguu guuro. Iyada oo la daabacayo in ay ku haboon tahay dhadhanka oo dhan, ka soo jiidashada iyo hurdiga ilaa hippie-casriga ah, iyo qaababka farsamo ee kaa taageera ilaa xitaa aadka ugu daran ee xilliga barafka, Burton's 2015-2016 uruurinta haweenka waa isku-dhafka ah taam, shaqo iyo fashion sida aan marnaba iyaga lama arag.
Ciyaalkani wuxuu isku daraa indigo batik indhaha oo leh cusbooneysiin cusub oo jilicsan kaas oo ku xasuusin doona in ka badan oo ah jaakad loo yaqaan 'jetet-ka' ah oo ka badan sanduuq, jaakad yar oo jiir ah. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee farsamada ah waxaa ka mid ah "New Living Lining ™" kaasoo xajinaya heerkulada gudaha iyo dibedda si ay u bixiyaan diirimaad ama qaboojin inta lagu jiro xilliga oo dhan.
Iyada oo jacket Cinder Antorak jacket, qaabka dariiqa ayaa qaada qulqulka. Inkasta oo qaabkani uu hubaal yahay in uu wax ka xadidayo ishaada, fiiri daqiiqad yar oo jajabkan ah oo la jeexay: waa jajab, laakiin waxaa la socda jilib si loo hubiyo in si fudud loo gaari karo dhamaan qalabkaaga. Dumarkan Burton ee dumarka sidoo kale waxaa ka mid ah "New Living Lining ™" si aad u qaboojisid heerkulka mercurial-ka, oo ay weheliyaan Pit Zips ™ marka aad u kululaato.
Burton Riley Hal Cutub
Sidee ufududayn karnaa gabalkan cajiibka ah? Haddii aad tahay taageere ku xeel dheer oo ku dhejis ah, waxaad ku riixi kartaa hal shey oo ah Burton Riley One Piece. Qaabkan madax-ilaa-lugo leh wuxuu ka bixiyaa difaac guud oo ka kooban unugyada, iyada oo la isticmaalayo dhar-biyoodka biyaha iyo hawo-gariirka DRYRIDE Dharka Durashell ™ iyo dhejiska biyaha aan dherarka lahayn. Waxaad ka heli doontaa "New Living Lining ™" halkan, oo laga yaabo inay ugu fiican tahay dhammaanba, damaanad-noolaanshaha nolosha ayaa ka dhigaysa maalgelintan aan lahayn maskaxda.
Burton AK 2L Ciraaq
Meelkani Burton waa doorasho fiican ee barafka qoyan ama roobabka guga. Xaqiijinta inaad ku qallajisid, xitaa xaaladaha dhabta ah ee dusha sare, jaketiga heerkulka waxaa ka mid ah dharka GORE-TEX® iyo qoryaha wax lagu duubo, waraaqaha biyaha u adkaysta, dabeecada yar-yar ee isdhexgalka, iyo jajabyada loo qoondeeyay xorriyadda guud. Iyada oo la kala dooran karo qudaarta iyo qolka loogu talagalay laymanka, jaakadaan waxay bixisaa dhammaan wixii aad ku weydiin kartid qolof.
U fiirso ururinta
05 oo 06
Burton TWC Maverick Snowboard-ka
Haddii aad raadineyso jimicsi, jakin-taakuleeye-taakule-barafeed cusub, Burton Maverick Jacket waa. Ku dheji silhouette dheer iyo qaabka bomberka, oo faahfaahinta sida gacmo laysku xiro, biyaha aan dhererka lahayn iyo neefta leh DRYRIDE Durashell ™ qurxinta ganaaxa, iyo rinjiga 'Thermacore ™' ee yaryar, muuqaalkani waa muraayad maskaxeed iyo shaqeyn. Miisaska waxaa ku jira daboolka gudaha ah ee silkadda leh, iyo meelo badan oo jilicsan laakiin wax badan oo ka soo kordha wax kasta oo ka soo wicitaanadaada waxay u gudbaan muraayadaada, iPadkaaga iyo boorsadaada, iyo wax ka badan.
Burton 2015-2016 Dharka Haweenka
Ma rabtaa in badan oo ka mid ah Burton? Waa kuwan qaar ka mid ah kuwa ugu sareeya:
Burton Calaamadeyn Jaale ah
Burton Dumarka Cagaaran
Hayso Dukaanka: 6 Buugaagta Buugta Kale Waxaad Baahan Doontaa Shaxankaaga Kahor
Miyaad haysatay bacda wax iibsiga? Ka fiiri 6 buugta barafka aad u baahan tahay miiskaaga kaafiga hadda ...
La kulan Boorsooyinka: Intro ee Bilaabayaasha Golf
Cobra Golf: Qaybinta Shirkadda qalabka
Dib u eegis: TaylorMade Tour Calaamadaha la doorbido
Sidee loo xiraa Layers
Sida loo Isticmaalayo Shirkadda Kayak
Naadiga Ugu Fiican: Dib u Eegida Asalka
Dib u eegis: Cleveland HiBore XLS Driver-ka
Marka TaylorMade Reinvented Maxfli ahaan Qiime, Dhamaan Garoonka Golf Ball
Cobra waxay soo saartaa Saddex Sargaal oo Cusub ah
Wareegyada Cusub ee Fairway Woods waxay diyaar u yihiin inay ciyaaraan
La kulanka Irons: Intro ee Bilaabayaasha Golf
TOCFL - Imtixaanka Shiinaha oo ah luqad Dibediis ah
Dib-u-celinta Tenergy 05 Dib-u-eegista Shaxda Tennis-ka
1968 Olombikada Sawir-qaadista Shirkadda Peggy Fleming
Art Art ee Haiku
Cómo pueden indocumentados xayeysiiyo nuevo México
Maxay yihiin 5da laanta kiimikada?
Jaamacadda Maryland, Aqoonta Iskuulada Jaamacadda
Barista Ardayda Qaadanaysa Philosophically
Ka doodista 6 Baybalka Kitaabka Qudduuska ah ee Bulshada Dhagaystaha iyo Waajibaadka Rabbiga
Taariikhda Nidaamka Fanka Martial ee Kali
101 Fasallada Heerka Inaad Ku Nooshahay
Miyuu jiraa Bodybuilders Train marka ay xanuunsanayaan?
Piano Music for "Adeste Fideles"
Ka hor intaadan iibsan qalabka muhiimka ah ee farshaxanka sawirada
Maxay Maxkamad Moot
Maareynta Meelaynta: Qeybta
Dagaal qabow: USS Pueblo Dhacdo
Dagaalkii sokeeye ee Mareykanka: Dagaalkii ugu horeeyay ee Bull Run
Ma waxaad u maleyneysaa inaad adeecsanaantaada u jeedisay qoyskaaga, waalidiinta?
Dhisidda Erie Canal
Josephine Cochran iyo Qabsashada Mashiinka Bulaacadda
Waa maxay Dhibaatada Jacaylka ee Kitaabka Quduuska ah?
Sidee Loo Qaadi Doonaa SPF
Sidee loo bartaa laadarka Kintirka